Ankoatra ny resadresaka nifanaovan’izy ireo tamin’ireo ray aman-drenin’ity zaza ity izay marihina fa nisy nanala ny masony roa dia nanolotra fanampiana maro samihafa ihany koa izy ireo. Anisan’ireny ny fatana mitsitsy iray, vilany lehibe roa, lapoaly iray, vilany saba iray, thérmos roa, sivana iray, plateau lehibe iray, fitoeran-drano lehibe roa, bidon 20 litatra miisa roa ho fanampiana ny ray aman-drenin’ilay zaza amin’ny asa fiveloman’izy ireo. Nahazo seza misy kodiarana na “chaise roulante » ihany koa ilay zaza hampiasainy amin’izay toerana mety alehany. Raha ny filazan’ireo manodidina ity zaza ity dia resaka fanaovana sorona no ahiana ho nakan’ireo tsy mataho-tody ny masony, baiko avy amin’ireny mpanao mosavy milaza mahavaha olana ireny. Tonga nanotrona izao fitsidihana izao ny kaomisera ao amin’ny kaominina Ankililoaka, ny solontenan’ny Ben’ny tanàna ary ny dinabe any an-toerana.